Install Myanmar Font in Samsung Galaxy Phone and Tablet (No root required) - IT-KOKO - IT-KOKO
By: အိုင်တီကိုကို With: 10 Comments ဒီတခါတော့ Samsung Galaxy ဖုန်းတွေကို မြန်မာလို မြင်အောင် လုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပါ့မယ်။ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ applications နှစ်ခုကိုတော့ သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ download အောက်မှာ ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံး ဖုန်းရဲ့ Setting>Application>Unknown sources ကို တစ်ထားပါ။ ဒါမှ download ထားတဲ့ files တွေကို သွင်းလို့ရမှာပါ။ AppInstaller နဲ့သွင်းလို့ရပါတယ်။ အရင်ဆုံး Fontomizer ကိုသွင်း၊ ပြီးရင် Zawgyi_One ။ အားလုံး သွင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Setting > Display > Font ကိုသွားပါ။ Zawgyi font ကို font list မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ ရွေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မြန်မာလို ကောင်းကောင်းမြင်ရပါပြီ။ တခြား font တွေကိုလည်း သွင်းလို့ရပါတယ်။ Fontomizer မှာ ရှိပါတယ်။ အားလုံး အိုကေပါစေ။
Ref : http://www.myanmarmobileapp.com/?p=1281
Credits : Thet Naing Soe
Myanmar FontSamsung Galaxy Phone
You don’t need fontomizer. Just ZawgyiOne.apk is fine.
btw, did you made ZawgyiOne.apk? If you don’t you should give credit to the one who made it.
NO i did make that apk, but i dun know who make i just it share from Myanmar Mobile Application Store!
Can only see ?
Can i type it in myanmar?
if it is can, plz help me?
အစဉ်ပြေတာနဲ့လုပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ iTextMM2 သွင်းထားတယ်။ လိုတာရှိရင်ပြောပါ။
nokia x7 အတွက်လဲသိချင်ပါတယ်
I don’t know about Symbian Anna OS, Please ask at
khant kyaw lynn
I also want to know how to upgrade HTC desire HD. plz, plz.
to upgrade ur HTC, go to setting>> about phone>> update
u need wifi to download the updates.
U can’t be downgraded ur phone.
If u want to know more, please ask in
Thank you very much for sharing…..:)
ႊအရမ္းအရမ္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ… ျပသနာတက္ေနတာ… အခုမွပဲ အဆင္ေျပသြားတယ္ Random Posts
Google က မနေ့ကပဲ Google+ အတွက် Game ကို စဆော့လို့ရပါပြီ။ Game ဆော့ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ပျော်စရာပေါ့။ မဆိုးပါဘူး တော်တော်လေးတော့ရှိပါတယ်။ Facebook လောက်တော့ မဆုံသေးဘူး။ နောက်ပိုင်းအသစ်တွေ ထက်ထွက်ဖို့တော့ရှိမှာပါ။ အခုလောလောဆယ်တော့… Design
ဒီ ပရောဂျက်ကိုတော့ တစ်ခုလုံး ကျွန်တော့ကို လွဲထားတယ် ဒီနှစ်ပိုင်းအကုန်မှာ အပြီးလုပ်ရမှာပါ၊ လောလောဆယ်တော့ ဘားမှ ကောင်းကောင်း မပြီးသေးဘူး၊ အခုမှ စလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဟိုရက်ပိုင်းတွေက outsource ကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်များနေတော့ ဒီ ပရောဂျက်ကို မစဖြစ်သေးဘဲ… နည်းပညာဆိုင်ရာ
Box က ဒီနေ့ Update ဖြစ်ပြီးတော့ Android user တွေကို Free Storage 50GB ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံးအတွက်ရမှာဆိုတော့ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ တစ်ခြား Dropbox, Minus တိုလို invite လုပ်မှ… © Copyright 2013 · IT-KOKO · All rights reserved.